Dagaalka siyaasadeed ee ka dhalan kara geerida garsooraha Maxkamadda Sare ee Maraykanka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dagaalka siyaasadeed ee ka dhalan kara geerida garsooraha Maxkamadda Sare ee Maraykanka
Garsoore ka tirsanayd Maxkamadda Sare ee Maraykanka, Ruth Bader Ginsburg, oo ahayd qof ku suntanayd u doodidda xuquuqda haweenka ayaa u dhimatay cudurka kansarka iyada oo 87 jir ah, sidaana waxa lagu sheegay war ka soo baxay Maxkamadda.
Ginsburg waxay Jimcihii u geeriyootay cudurka kansarka iyadoo jiifta gurigeeda oo ku yaal Washington DC, oo ay hareera fadhiyaan ehelkeedu, ayaa warbixinta lagu yidhi.
Horaantii sannadkan ayaa Ginsburg sheegtay in laga daweynayey cudurka kansarka oo ku soo noqday.
Waxay ahayd haweenay codkar ah oo u ololaysa xuquuqda haweenka oo ay ku hiran jireen dadka Maraykanka ee qaba aragtida Liberal-ka.
Ginsburg waxay sidoo kale ahayd garsooraha ugu da’ada weyn garsoorayaasha Maxkamadda Sare iyo haweeneydii labaad ee taariikhda Maraykanka garoore ka noqota Maxkamaddaas, waxaanay ka shaqaynaysay muddo 27 sannadood ah.
“Dalkeenna waxa ka baxay garsoore maqaam taariikhi ah lahaa” ayuu yidhi Gudoomiyaha Maxkamadda Sare John Roberts oo warbixin soo saaray Jimcihi. ” Hadii aanu nahay Maxkamadda Sare waxa aanu weynay qof aanu u hanweynayn oo jaal ahayn. Maanta waanu murugaysannahay laakiin waxaan kalsooni ku qabnaa in jiilalka mustaqbalku ay Ruth Bader Ginsburg u xusi doonaan sidaan u naqaanayn oo ah qof aan daalin oo ku miigan caddaaladda” ayuu yidhi.
Maadaama ay ka mid ahayd afar garsoore oo keliya oo aaminsanaa aragtida Liberal-ka, ayaa aad isha loogu duruufaheeda caafimaad. Geerida Ginsburg na waxay kor u qaaday suurto galnimada ah in Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, oo ka tirsan xisbiga Jamhuurigu isku dayo inuu kordhiyo aqlabiyadda kooban ee garsooreyaasha muxaafadka ahi ku leeyihiin Maxkamadda, xataa inta aan la gaadhin doorashada bisha Noofember.
Geerideeda maalmo uun ka hor, ayaa Ginsburg waxay muujisay sida ay aadka ugu diidantahay tallaabo noocaas ah, “waxa aan aadka u jecelahay waxa weeyi in aan la magacaabin qofka la igu bedelayo ilaa madaxweyne cusub la dooranayo” ayay ku qortay warqad ay u dirtay gabadh ay ayey u tahay, sida ay ku warantay idaacadda National Public Radio.
Xog ay ka heshay Aqalka Cad shabakadda CBC News ee ay wadashaqayntu ka dhaxayso BBC-da, ayaa tibaaxday in la filayo in Madaxweyne Trump sida ugu dhakhsaha badan u magacaabo garsoore muxaafid ah oo buuxiya halka ay bannaysay.
Trump oo ka falceliyey geerida Ginsburg isaga oo fagaare olole doorasho ah oo ka dhacay Minnesota ka hadlaya ayaa yidhi “Maan ogayn. Qof nolol fiican soo martay ayay ahayd, maxaa kaleed odhan kartaa?”
Geerida Ginsburg waxay dardar cusub oo aan la filayn gelinaysaa tartanka madaxtinimada oo bilihii u dambeeyey aan xamaasad badani ka muuqan. Haatan, waxa loolanka loogu jiraa ma aha oo keliya Aqalka Cad e , waxa sidoo kale bilaabmaya dagaal siyaasadeed oo loo galayo isku dheeli tirka aragtida siyaasadeed ee garsooreyaasha Maxkamadda Sare.
Waxay arintu ku xidhan tahay cidda ay Madaxweyne Trump iyo Xisbiga Jamhuurigu soo xushaan. Waxay isku deyi doonaan in ay buuxiyaan jagadaa banaanaantay inta aan sannadkani dhamaan, ciddii doontaaba ha ku guulaysato doorashada madaxtinimada dhici doonta Noofember e. In la bedelo garsoore ay ku hiran jireen dadka qaba aragtida Liberal-ku oo ay u badan tahay in ay dhici kartaa, waa wax lagu kasban karo codka dadka qaba aragtida muxaafidka ah.
Waxa kale oo ay yeeli karaan in ay sugaan oo kursigaasi iska bannaanaado, taasina u noqon kartaa wax ay ku soo jiidan karaan codadka dadka aragtida muxaafidka ah qaba, gaar ahaan kaniisadaha Evengelical-ka oo u arki kara fursad ay ku horjoogsan karaan in dumarka loo ogolaado in ay iska soo ridi karaan hadii ay uur qaadaan oo ay dad badan oo doorashada madaxtooyada codkooda ka dhiibtana ku abaabuli karaan.
In jagadaa bannaanaatay la buuxiyaa waxay ka cadhaysiin doontaa Dimuqraadiga oo gocan doona in Jamhuurigu muddo bilo ah ka horjoogsadeen madaxweynihii hore, Barack Obama, in uu buuxiyo kursi banaanaaday sannadkii 2016.
Dhan kale marka laga eegana, haddii ay Jamhuurigu sugaan inta doorashada la qabanayo, waxa dhici karta in musharaxa Dimuqraadiga ee Joe Biden guulaysto oo uu isagu magacaabo cidda lagu bedelayo Ginsburg 2021, arintaas oo aan u cuntamayn Jamhuuriga.
Saadaasha jirta oo dhami se waxay tilmaamaysaa in ay u badantahay in Jamhuurigu qaadan doonaan labada arimood ta hore. Walaaca ah in cidda la magacaabayaa noqon karto qof aan dhex ahayni, waxa uu meesha ka baxayaa marka la magacaabo ee xilka loo dhaariyo maadaama oo garsooreyaasha Maxkamadda Sare ay xilka hayaan inta noloshooda ka hadhay.
Si kasta oo ay u dhacdaba, waxaan shaki ku jirin in dhacdadani dalka ka hurinayso dagaal adag oo siyaadeed oo ku soo beegmay goor dalku markiisa hore ba ku jiro duruufo dadkii kala qaybiyey iyo culays maskaxeed oo arimahaa ka dhashay.
Previous articleWeerar loo adeegsaday bam-gacmeed oo xalay ka dhacay magaalada Beledweyne
Next articleMaraykanka ayaa maalinta Axadda ah dalkiisa ka mamnuuci doona baraha bulshadu ay ku wada xiriirto ee kala ah TikTok
Mogadishu residents fear and despair
President Dani meets with Speaker of the Upper House Senator Abdi...
Hay’adda laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha Somaliya oo fariin Muhiim ah u...
Maxaa looga Hadlayaa maalinta Bari Kulanka Baarlamaanka